Buug-gacmeedka Waalidka / Ardayga Deephaven | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ku soo dhowow Qoysaska Minnetonka!
Buug-gacmeedkan waxaa loogu talagalay inuu noqdo dukumiinti nool. Bogagga badankood, waxaad ka heli doontaa waxyaabo hoosta ka xariiqay, kuwaas oo ku siinaya xiriirinno faahfaahin dheeraad ah boggayaga internetka. Waxaan ku dhiirigalinaynaa waalidiinta iyo ardayda inay soo booqdaan markay su'aal timaado. Macluumaadka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa. Sidoo kale, haddii aadan awoodin inaad hesho macluumaad, fadlan wac Xafiiska Isgaarsiinta Degmada 952-401-5095 si aan si joogto ah ugu sii wanaajinno faa'iidada kheyraadkan.
Marka lagu daro macluumaad muhiim u ah waalidiinta, waxaan ku darnaa qeyb ku saabsan Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha Ardayga. Waxaa muhiim u ah ardayda iyo waalidkaba inay ka digtoonaadaan siyaasadaha qaarkood oo dejinaya rajooyinka dhaqan ee Degmada iyo ciqaabta edbinta ee ardayda. Dhammaan siyaasadaha Guddiga Dugsiga waxay ku yaalliin websaydhka degmada ee hoos timaadda tabka Maamulka.
Wadahadalka u dhexeeya shaqaalaha dugsiga iyo waalidiinta ayaa ah mudnaanta sare. Marka qoysaska iyo dugsiyadu si iskaashi u shaqeeyaan, fursadaha ardayda dhammaad ma leh. Waxaan diyaarinay dhowr wadiiqo oo xiriir xushmad leh oo xushmad leh, oo ay kujiraan guryo furan, habeenada iskuulka lagu laabto, shirarka waalidka iyo macalinka, fursadaha iskaa wax u qabso, golayaasha la talinta, boostada codka, e-maylka, websaydhada fasalka, marinka khadka tooska ah ee ardayda iyo inbadan. Waxaa si buuxda nooga go'an inaan si joogto ah ula soo xiriirno oo aan si dhow ula shaqeyno si aan u taageerno guusha ilmahaaga. Waxaan si kal iyo laab ah kuugu rajeynayaa adiga iyo qoyskaagaba inaad ku guuleysataan oo aad ku qanacdaan waayo aragnimo waxbarasho sannadkan oo ah Dugsiyada Minnetonka!
Soodejiso buuga Waalidka / Ardayga
Deephaven Hoose /